Nhasi Qualcomm iri kuburitsa seti yemabhenji mhedzisiro kune yavo nyowani Snapdragon 888 SoC iyo yakagadzirirwa simba regore rinouya mureza weApple zvishandiso. Kazhinji, semakore apfuura, tingadai takave nemikana yekumisikidza reQualcomm's rezvigadziriso isu pachedu panguva yechipset yekutanga chiitiko, kana masvondo mashoma gare gare panguva yeCES. Zvisinei nekuda kwemamiriro ezvinhu ari pachena, izvi zvaisava… [Verenga zvakawanda ...] nezveQualcomm Inoburitsa Snapdragon 888 Mabhenji: Kuvimbisa Kugadzira
Kuti utambe mitambo paXbox One, iwe uchazoda controller, uye zvakakodzera kuve neyakakodzera controller. Microsoft's Xbox Elite Series 2 isina waya controller ndiyo yakanakisa mutambo wepadhi wekambani yekunyaradza. Unogona kuzvijairira kune zvaunoda, kutsiva akasiyana zvikamu, uye kunyange remap mabhatani kuburikidza neapp yeconsole nePC. Yakanakisa kwazvo - Xbox Elite Wireless Controller Series… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iwe unoda yakanakisa Xbox Rimwe mutungamiriri? Iyi ndiyo yakanakisa Xbox controller.
Nhasi Intel iri kuzivisa zvidzoreso kune mazhinji maSDD zvigadzirwa zvemitsara. Zvigadzirwa zvavo zvinoenderana ne3D NAND zviri kuvandudzwa kushandisa Intel's 144-layer QLC uye TLC NAND. Padivi reOptane rebhizinesi, isu tine zvakadzama kutsanangurwa kwechigadzirwa chekutanga kushandisa chechipiri-chizvarwa 3D XPoint memory, uye yakagadziridzwa Optane Memory caching mhinduro yevatengi maPC. Intel inewo… [Verenga zvakawanda ...] nezveIntel Inosheedzera New Wave yeOptane uye 3D NAND SSDs
NVIDIA Inowedzera GeForce RTX 3090 uye 3080 Kufona kweDuty Bundle kusvika Ndira
Kune vane rombo rakanaka vanogona kuisa maoko avo paGeForce RTX 3090 kana 3080 kadhi panguva yemakwikwi zvakanyanya yezororo rekutenga mwaka, NVIDIA yakasarudza kutapira poto nekuwedzera yavo Call of Duty: Black Ops Cold War mutambo bundle. Pakutanga zvakarongwa kupera musi waZvita 10, svumbunuro iyi yakawedzerwa kusvika Ndira 11 - inovawo kutanga kweCES.NVIDIA… [Verenga zvakawanda ...] nezveNVIDIA Inowedzera GeForce RTX 3090 uye 3080 Kufona kweDuty Bundle kusvika Ndira
Xbox Velocity Architecture yakatsanangura: Ngatitarisei pane chimwe nechimwe chinhu
Apo vanhu veMicrosoft vakazivisa Xbox Series X / S, vakataura nezvezvinhu zvakawanda, asi chakabata pfungwa yedu ndicho chinhu chavakadaidza kuti Xbox Velocity Architecture. Xbox Velocity Architecture yakatsanangura Iwe unoona, uchionekwa seyakanakisa mhinduro yevhidhiyo mutambo aseti kutenderera kwechizvarwa chinotevera cheXbox consoles. Zvakadaro, hatingazoshamisi kana iri mu… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xbox Velocity Architecture yakatsanangurwa: Ngatitarisei pane chimwe nechimwe chinhu